Nudgify: Kordhi Beddelaaddaada Dukaameysi leh Madalkan Caddaynta Bulshada ee Isku -dhafan | Martech Zone
Shirkadayda, Highbridge, waxay ka caawineysaa shirkad fashion ah inay soo saarto toos u-macaamil istaraatiijiyad gudaha ah. Sababtoo ah waxay yihiin shirkad dhaqameed oo kaliya bixisa tafaariiqleyaasha, waxay u baahdeen lammaane gacan ka geysan doona inuu noqdo cududda teknolojiyaddooda oo ka caawisa dhinac kasta oo ka mid ah horumarinta sumcaddooda, ecommerce -ka, ka -shaqaynta lacag -bixinta, suuq -geynta, beddelidda, iyo hababka dhammaystirka.
Sababtoo ah waxay leeyihiin SKU -ga xaddidan oo aan lahayn summad la aqoonsan yahay, waxaan ku riixnay inay ka bilaabaan madal diyaar ah, la qiyaasi karo, oo u baahan maalgelin yar oo ka badan xirmo si buuxda loo habeeyay… waxaan doorannay Soo iibso.
Sababtoo ah waxay meheraddan ka bilaabayaan meel xoqan, helitaanka kalsoonida booqdayaashayadu waxay noqon doontaa mid muhiim ah. Oo ay weheliso istiraatiijiyad xiriirka dadweynaha, otomaatiga suuqgeynta (iyada oo loo marayo Klaviyo), adeeg macmiil oo xooggan, iyo dhoof bilaash ah… waxaan u baahnay tilmaame goobta ecommerce lafteeda oo u oggolaanaysa booqdayaasha inay ogaadaan goobtu inay caan tahay oo ay adeegsadaan booqdayaasheeda. Waxaan u baahanahay a caddayn bulsho xalka si aan kala go 'lahayn ula midooba Shopify.
Waa Maxay Caddaynta Bulshada?
Cadaynta bulshada waa ifafaale bulsheed oo ay dadku nuqul ka sameeyaan ficillada kuwa kale iyagoo isku dayaya in ay ku dhaqmaan xaalad xaalad jirta. Marka la soo koobo, waa dadka sameeya waxa ay u fiirsadaan dadka kale ee sameynaya. Waa badbaado tiro ahaan.
Robert Cialdini, Saameynta, Cilmi -nafsiga Qancinta
Goobaha e -commerce, waxaan ku arkay shaqo caddeyn bulsheed oo dhaafsiisan booqdayaasha oo midba midka kale ku dayanayo. Caddaynta bulsheed waxay bixisaa habab kale oo lagu kaxeeyo beddelaadyada:
trust - Inaad aragto in booqdayaasha kale ay daalacanayaan oo wax iibsanayaan waa tilmaame xoog leh in sumadda, badeecadda, ama goobta la aamini karo.
Doonista - Goobaha leh tiro koob kooban, booqdayaasha waxaa lagu dhiirigeliyaa inay isla markiiba beddelaan halkii ay sugi lahaayeen. Cabsida Ka Maqnaanshaha (FOMO) waa farsamo beddelid awood leh.
caanka - Iyada oo kor loo qaadayo badeecadaha aadka loo iibinayo, booqde aan go'aan qaadan ayaa u janjeera inuu wax iibsado haddii ay arkaan in kuwa kale ay sameeyeen.
Soo Jeediyay - Ma haysaa iib ama qiimo -dhimis hadda firfircoon? Abuuritaanka Nudges -yadaani waxay u kaxayn kartaa sicirka beddelka dalabyada caanka ah ee aad haysato.
Helida -Xitaa haddii booqdahaagu uusan diyaar u ahayn inuu iibsado, waxaad sidoo kale ku riixi kartaa booqdayaasha inay doortaan dalabyada, wargeysyada, ama xitaa farriimaha qoraalka.
Cadee waxay hore u caawisay in ka badan 1,800 oo degel oo ku yaal in ka badan 83 dal inay kordhiyaan qiimahooda beddelidda-oo aan lahayn wax aan ahayn xog-waqtiga-dhabta ah. Astaamaha madalkooda oo dhammaystiran waxaa ka mid ah:
Hawlaha dhow -ka noqo beddelaadyadii dhowaa ama saxiixyadii dhowaa oo kordhiya kalsoonida
Quudinta Xogta Kaydka -Ku muuji xogta kaydka waqtiga-dhabta ah quudin otomaatig ah
Foomka Qabashada -Si otomaatig ah u muuji saxiixyada cusub
Hababka Nudge -Nudges horay loo-habeeyay oo loogu talagalay ganacsiga e-ganacsiga, safarka, SaaS iyo in ka badan
Nudge dhise - Ku samee Nudges cusub ereyadaada iyo sawirradaada
Xeerarka Muujinta - Go'aanso bogagga iyo aaladaha ay tahay in Nudges -yadu ka muuqdaan
Dejinta Habdhaqanka - U samee kicinta, dib -u -dhigga iyo muddada Nudges -kaaga adiga oo hagaajinaya dheel -dhegeyaasha.
Abuur Yoolal - U dhig boggaaga xaqiijinta yool si aad ula socoto beddelaadyada la caawiyay. Isticmaal tirakoobyada la dhisay si aad u hagaajiso oo aad u kasbato iibin badan.
Hababka Caadiga ah - U hagaaji mawduucyadaada si aad u dejiso codka saxda ah
Luqadaha 29 - Nudgify wuxuu si buuxda u taageeraa 29 luqadood oo kala duwan
Jiidyada & Daadinta Durdurrada - Abuur durdurro oo tus Nudges -kaaga si habsami leh
Falanqaynta Nudge - Qabso booqashooyinka, is -dhexgalka, iyo beddelidda caawinta si loo cabbiro soo -celinta maalgashiga caddaynta bulshada.
Algorithms -ka Nudgify waxay si joogto ah u baranayaan kaasoo Nudge ugu roon yahay heer kasta oo safarka macmiilka ah. Markaad sii dheeraato isticmaalka Nudgify, ayay sii qiimaysaa.
Bilaw Maxkamadeyntaada Xorta ah ee Bilaashka ah
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Cadee, Klaviyo, Soo iibso, iyo Amazon iyo adeegsiga xiriiriyeyaashaas iyada oo loo marayo maqaalkan.
Tags: cabsida maqnaanshahafomokordhinta siciradakordhiya sheekooyinkakordhi heerka sarrifka ecommercekordhi Shopify beddelaadyadanudgenuugidPsychologypop iibkacaddayn bulshowaa maxay caddaynta bulshada